nandroba – Midi Madagasikara
Ambohimanarina : Folo lahy nandroba fivarotana, lasa ny vola sy ny entana
Redaction Midi Madagasikara 10 janvier 2014 Ambohimanarina, nandroba
Jiolahy folo eo ho eo no tonga nandroba tao amin’ny fivarotana iray teny Antanety Ambohimanarina ny marainan’ny alakamisy tamin’ny 1 ora tany ho any. Ao ambany rihana no misy ilay tsena ary any ambony ny tompony no matory. Efa fantatr’reo jiolahy mialoha angamba izany zavatra izany ka tonga dia tao ami’ilay fivarotana ry zalahy no…
Befelatanana : Nisy nandroba ny karaman’ny mpiasa
Redaction Midi Madagasikara 8 janvier 2014 Befelatanana, karaman’ny, mpiasa, nandroba
Lasan’ny jiolahy ny volabe tokony ho karaman’ny mpiasa. Ny faramparan’ny volana desambralasa teo no nisehoan’ity asan-jiolahy ity raha araka ny fanazavan’ny mpitandro ny filaminana. Vola manodidina ny40 tapitrisa ariary no voaroba nandritra ny fanafihana, raha araka ny loharanom-baovao mitovy hatrany. Efa mandeha ny fanadihadiana amin’izao etsy anivon’ny pôlisy misahana ny heloka bevava etsy Anosy. Raha…
Miandrivazo : Miaramila nandroba matin’ny fokonolona
Redaction Midi Madagasikara 3 janvier 2014 Fokonolona, matinny, Miandrivazo, nandroba
Nanao fanamparam-pahefana tao amin’ny toeram-pisotroana ireo mpitandro ny filaminana roa lahy. Naka vola, nitifitra. Tezitra ny olona… Tezitra ny olona noho ny nafitsok’ireto miaramila mitam-basy. Vao nanomboka ny taona dia efa feom-basy no niainana tao Miandrivazo ny alarobia teo, andro voalohan’ny 2014. Niditra tao amin’ny trano fisotroana ireo miaramila roa izay rehefa nohamarinina dia miasa…